FIFIDIANANA 2018 : “Tokony halalaka ny rehetra eo amin’ny filatsahana hofidiana”, hoy ny Pasitera Mailhol
Maro ny hetsika hoentina hankalazana ny faha-15 taonan’ny fiangonana Apokalipsy ao Toliara, isan’izany ny fitokanana ny fiangonana vaovao ao Andakoro, ny kaonferansa lehibe ary ny fandalinana ny Baiboly sy ny hira ara-pilazantsara. 10 avril 2017
Tonga aty an-toerana mihitsy ny Pasitora Mailhol, izay mpanorina ity fiangonana ity, izay nifampitafa tamin’ny mpanao gazety, ny alakamisy hariva teo tao amin’ny Hotel Aloalo, ao Tsianaloka ao.
Na dia eo aza ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny fiangonana, dia nisy ihany koa ny resaka politika, izay mahakasika ny raharaham-pirenena amin’izao. Nambarany fa tokony halalaka ny rehetra eo amin’ny filatsahana hofidiana ary tsy tokony hisy ny fanavakavahana.
“Mare, hoy ity Pasitora ity, ny zava-misy ary mety hiafara amin’ny fihetseham-bahoaka raha misy ny tsy fahazoan’ny sasany hilatsaka hofidina, indrindra ny amin’ny fifidianana izay ho Filoham-pirenena”. “Eny fa na dia io filoha ankehitriny, hoy izy, dia tafiditra tamin’ny raharahan’ny 2009 satria tao anatiny ihany koa, raha iny fanapahan-kevitry ny Solombavambahoaka iny no entina dia ao anatin’ireo tsy hahazo milatsaka io ny Filoha”.